Ukususwa kweenwele ze-DIODE laser - China diode laser ukususa iinwele abavelisi, abanikezeli
Umtya weVascular Popular Spider Veins ukususwa kwe980nm diode laser machine machine RBS07
Iiseli ze-Vascular zithatha i-laser yamandla aphakamileyo ye-980nm wavelength, ukuqiniswa kuyenzeka, kwaye ekugqibeleni kuphele. Ukoyisa ububomvu kunyango lwelaser indawo enkulu yokutshisa ulusu, uyilo lobuchwephesha.
Nd yag Q-Shintsha kunye neNqaku lokususa iinwele 808 diode laser ukususwa kweenwele ngokusisigxina i-E9DQ
I-Diode 808 Laser ngumgangatho wegolide ekususeni iinwele ngokusisigxina kwaye ifanelekile kuzo zonke iinwele ezinombala kunye neentlobo zolusu-kubandakanya ulusu olujiyileyo.I-808nm kufutshane ne-infrared laser yeyona ilungileyo yokufunxa i-melanin ukuze isebenze kakhulu kwiindawo ezahlukeneyo zolusu
Handle Single 3 Wavelength 755nm 808nm 1064nm Diode Laser Hair Ukususwa kweY9 Pros
Njengesisombululo esidibeneyo, i-TERMINATOR 808 + idibanisa izibonelelo zazo zonke ii-wavevelths ezi-3 ezingama-808nm 755nm 1064nm, ii-wavevel ze-3 zineempawu ezahlukeneyo zelaser
1600W Soprano Ice Platinum 755 808 1064 Diode LASER Izinwele Ukususwa kweY9 Pro
Itekhnoloji yokususa iinwele ye-diode laser isekwe kwi-dynamics ekhethiweyo yokukhanya kunye nobushushu. I-laser ihamba ngomphezulu wolusu ukufikelela kwingcambu yeefollic zeenwele.
Ukususwa kweenwele ngokusisigxina 808nm Diode Laser nkqo Y2
Ngexesha lonyango lokususa iinwele, ukukhanya kudlula kulusu kwaye kufunxwe yi-melanin kwishaft yenwele.
Laser diode entsha 755 808 1064 laser ukususwa iinwele 808nm diode laser ukususwa kweenwele umatshini Y8B
I-diode laser entsha ye-755 808 1064 ye-laser yokususa iinwele iyabandisa ngokusebenzisa ubuchwephesha, ukuze unyango lwentloko kubushushu obubi, ngokungafaniyo nelinye i-laser etshisa ulusu, ukukhusela ngcono ulusu.
Umatshini wokuSusa iiNwele oMtsha we-808nm weLaser yeYon Salon Y9A
Amandla e-laser ngelo xesha lokungena ngokukuko kuxinaniso oluphezulu lwe-epidermis, umaleko wesikhumba sombala ukuze ufikelele kumaqela, ibe kukufakwa kwesikhumba kuhambelane.
Intengiso Hot 808nm diode laser umatshini ukususwa iinwele Y9C
Laser epilator portable non channel diode laser 808nm isigxina laser ukususwa kweenwele umatshini Y9D
I-Diode 808 Laser ngumgangatho wegolide ekususeni iinwele ngokusisigxina kwaye kufanelekile kuzo zonke iinwele ezinombala kunye neentlobo zolusu-kubandakanya ulusu oluntsundu.
I-Portable 980NM diode laser umatshini wokususa iinwele osisigxina RBS02
I-laser ye-980nm yeyona nto iphambili yokufunxa iiseli zemithambo yePorphyrin. Iiseli ze-Vascular zithatha i-laser yamandla aphakamileyo ye-980nm wavelength, ukuqiniswa kuyenzeka, kwaye ekugqibeleni kuphele.